Zimbabwe's Tajamuka social movement vows to protest as groups challenge Mugabe's ban - Linkis.com
Proceed to the page: http://linkis.com/nOypZ
Zimbabwe's social media revolt yet to take root in rural areas - Nehanda Radio - Airiters
By Cris Chinaka CHIREDZI, Zimbabwe, (Reuters) – Deep in Zimbabwe’s drought-stricken rural district of Chiredzi, news of the biggest protests against President Robert Mugabe in a decade reached Peter Mufaro only after a week. Supporters of “ThisFlag campaign” demonstrate outside the Harare...
BREAKING: President Mugabe finally agrees to step down, Mnangagwa to rule, Grace to become VP #thisFlag #twimbos #Tajamuka - Zimbabwe Today | Zimbabwe Today
President Robert Mugabe’s days in office are now numbered, as the veteran leader has reportedly secretly bow down to pressure from the country’s securocrats to announce his departure, Spotlight Zimbabwe, has been told. Mugabe who is fighting to put out the worst political fires of his career...
Zimbabwe: Mugabe won’t step down – Zanu-PF » TODAY.ng
Zimbabwe President Robert Mugabe will not resign as demanded by protestors who brought the country to a standstill on Wednesday, the ruling party has said. The country was brought to a standstill in one of the biggest protests to rock Zimbabwe in the last decade after a social media movement known...
Zimbabwean preacher Evan Mawarire is due to appear in court on Wednesday to face charges of inciting public violence relating to his calls for “stay at home” protests against President Robert Mugabe, his lawyer said. Mawarire, whose social media movement has rattled the 92-year-old Mugabe’s...
Unemployed graduates protest in Zimbabwe #Tajamuka #ThisFlag #‎rejectbondnotes‬ - Nehanda TV
Watch this compilation of video clips from the protest in Harare on Wednesday by unemployed graduates unhappy with the failure of President Robert Mugabe’s regime to provide the 2,2 million jobs it promised at the last election. They were joined by others protesting the controversial introduction...
Zimbabwe: #ThisFlag movement leader Pastor Evan Mawarire 'will face more death...